Sidee ayay noqon kartaa shaxda kooxda Chelsea ay caawa kala hortagayso Liverpool? – Gool FM
(Istanbul) 14 Agoosto 2019. Kooxaha Chelsea iyo Liverpool ayaa ku wada ballansan dalka Turkiga caawa, halkaasoo ay ku wada dheeli doonaan Final-ka UEFA Super Cup.
Halyeyga Chelsea ahna macallinka cusub ee kooxdaas Frank Lampard ayaa rajaynaya inuu koobkiisii ugu horreeyey gacanta ku dhigo, kaddib markii uu guuldarro ka soo gaartay Man United ku furtay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan.
Blues ayaana guuldarro 4-0 ay ka soo gaartay Manchester United kulankoodii ugu horreeyey ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan kaasoo ka dhacay garoonka Old Trafford.
Kooxda ka dhisan Galbeedka Magaalada London ayaa la dhibtoonaysa dhaawacyo dhowr ah, waana arrin xaaladda ku sii adkeynaysa macallin Lampard kulanka caawa ka dhacaya Magaalada Istanbul.
Haddaba shabakadda Sports Mole ayaa shaacisay sida ay noqon karto shaxda ay ku soo geli doonto Chelsea kulanka ay caawa Turkiga ku wajahayaan ku guuleystayaasha Champions League ee Liverpool.
Xiddigaha ka maqnaanaya kooxda Blues waxa ay kala yihiin-: Antonio Rudiger (dhaawac jilibka ah), Ruben Loftus-Cheek (dhaawac muruqa ah), Callum Hudson-Odoi (dhaawac muruqa ah), Reece James (dhaawac canqowga ah).
Waxaa sidoo kale kulankan kooxda Chelsea shaki laga gelinayaa ciyaaryahan Willian oo la dhibtoonaya dhaawac muruqa ah.